Fihenam-bidy EPS manjono mitsingevana fanamboarana sy orinasa | XiongYe
Kalitao avo lenta - Vita amin'ny busaora EPS avo lenta izay tsy mora vaky na simbaina, azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava, azo ampiasaina amin'ny famandrihana trondro azo ampiharina trondro.
Loko marevaka - Tian'ny hazandrano mora ny misarika trondro. Topazo maso ny fitsaboana eto ambonin'ny tany, ankoatry ny firakotra akrilika, manana loko mamirapiratra isika, loko miloko mamirapiratra ary mamirapiratra.
Miasa Tsara - Mamaly tokoa rehefa mandray ny jono ny trondro. Miasa tsara amin'ny jono amin'ny toe-javatra sy halaliny isan-karazany.
Ny jono mitsingevana dia fomba iray tsara hisarihana trondro amin'ny paoninao rehefa ambany ny fahitana anaty rano. Azonao atao ny mampiasa azy ireo ho toy ny teboka momba ny maso mba hahalalanao azy foana hoe aiza ny paoninao.
Misy karazana fitsangantsanganana isan-karazany misy. Ny karazany ilainao dia miankina amin'ny toerana alehanao manjono, ny halaviran'ny fahitana ao anaty rano, ny hafainganan'ny rivotra ankehitriny, ny haben'ny maunu ary ny halalin'ny rano.
Mety mila manandrana ny sasany ianao hahalalanao hoe iza ny float mety aminao indrindra. Afaka misafidy karazan-karazany maro ianao, ao anatin'izany ny mitsingevana hazo, mitsingevana andry, mipoitra bosoa (mety hitabataba kely) ary mitsingevana miendrika atody (izay afaka mivezivezy manodidina ny vatolampy sy ny kibay). Ny fisafidianana ny mitsingevana mety dia mety hahatonga ny fahasamihafana eo amin'ny andro jono tsara sy ny fakana izay tsy misy na inona na inona mihitsy.
Ireto sambo sambo ireto dia tsara ho an'ny jono surf amin'ny Pompano ary foto-tsakafo manerana an'i Florida rehefa manjono ity karazan-trondro mpifindra monina ity. Izy ireo koa dia miasa tsara amin'ny fomba fanjonoana maro hafa rehefa te-hanampy loko sy na flotation amin'ny sambo fanjonoanao ianao. Hita amina fonosana loko 100 sy 12 samy hafa izy ireo.
Misy endrika hafa sy habe amin'ny sambo manjono manjelanjelatra ihany koa, raha ilaina dia ampahafantaro anay.
Previous: Boaty foam EPP
Manaraka: EPS boaty fanosotra gilasy